China ịgbado ọkụ okpokoro teknụzụ ngwa ọrụ na ndị na-eweta ya | Bocheng Co-ihe okike
zuru oke maka oghere. infinitely agbanwe elu-kemeghi support ebupụta.
N'iji itinye aka n'inye usoro ntanetị na tebụl ịgbado ọkụ 3D. ofu na infinitely kemeghi via oblong oghere. zuru oke maka oghere. Nchikota Bores / Oblong onu
Nchikota usoro bores / Oblong oghere, ya mere ọtụtụ clamping nhọrọ
Clamping na ịchọta n'akuku bores / Oblong oghere buru ibu
Clamping na ịchọta n'akuku bores / Bores / Oblong oghere ọkara
Anyị nwere nha na ụdị dị iche iche maka tebụl ịgbado ọkụ D28 / D16 / D22 3D
Ewepụghị n'akuku mmanya
Ọnọdụ zuru ezu n'ime na n'èzí. Ọtụtụ ohere maka oblong oghere na sistemu usoro. Na-aga n'ihu na-agagharị na oghere oblong.
Mgbidi Universal na Tilt Angle
The nlele nlele bụ ihe na-enye aka na tebụl ịgbado ọkụ mgbe ịchọrọ ịrụ ọrụ na nkwonkwo angular na ngwaahịa gị ọkachasị ndị siri ike ịnweta akụkụ. Ọ ga-adị mfe ịgbanwe iji na akụkụ nke ị chọrọ na markings na positioner
were dị ka ihe nkwụsị ma ọ bụ nkwado • Mgbakwunye na PC mkpọchi ma ọ bụ njikọ mkpọ
Ejiri iji ya rụọ ọrụ na mpaghara ọrụ • Simpledị Mfe • Nchara
infinitely kemeghi site n'ọtụtụ • nkenke nha
Ihe nkwụsị zuru ụwa ọnụ dabara adaba maka ijikọta igwe na mpempe akwụkwọ
Ngwakọta usoro mụụrụ / oblong oghere maka ọtụtụ clamping ohere. • Ọdịdị dị ogologo ma sie ike nke nwere nnukwu ibu maka nnukwu ihe ma ọ bụ ogologo. • adjustmentga n'ihu mgbanwe site oblong onu.
elu ukpụhọde ngwaọrụ
Nkwado nọgidere kemeghi si 75 ka 100 mm. • Karịsịa nke ọma ruru eru maka ebe nchekwa V na arbor. • Maka ntinye kpọmkwem na spacer na-agbanwe agbanwe. • Kwụsị wdg na PC-bolt nwekwara ike clamped na usoro mụbara.
Oghere ọnọdụ "V" bụ ihe eji arụ ọrụ mgbe ọ na-arụ ọrụ na ihe ọkpọkọ. Emere ya nke ọma iji chọta ọkpọkọ kwesịrị ekwesị. Mpempe akwụkwọ ịchọtara V dị iche iche dịgasị iche iche na oghere mmeghe n'ihi eriri ọkpọkọ dị iche iche
Spacer Set nwere ihe nkedo ma nwee ike ichota iji mezuo oke. • maka ndozi nke 5-100 (28) ịdị elu dị elu karịa ntụpọ ntụpọ • ntanye pere mpe 1mm • na nha etched n'elu nke ọ bụla spacer • dabara usoro niile bores • ijikọ onwe ya na O-yiri mgbaaka • gụnyere: (28) nkwado mandrel onye + aka uwe
Nke gara aga: ịgbado ọkụ table Clamps
Osote: ịgbado ọkụ table
3d Mgbanwe ịgbado ọkụ table
3d Tebụl ịgbado ọkụ Modular
3d Tablesgbado ọkụ na tebụl
D28 3d ịgbado ọkụ Isiokwu
Tebụl ịgbado ọkụ 3d
Isiokwu Ndị Na-arụ Ọrụ Ngwá Ọrụ
Tebụl ndị eji egwu egwu
Nitrided 3d ịgbado ọkụ Isiokwu
Steel ịgbado ọkụ Isiokwu
Ịgbado ọkụ Isiokwu
Wgbado ọkụ Tebụl